Massimiliano Allegri oo hal arin kaliya ka doonaya Cristiano Ronaldo – Gool FM
Horudhac: Crystal Palace vs Liverpool… (Rikoor waalli ah oo uu Jurgen Klopp ka heysto naadiga Palace oo taariikh u noqday horyaalka Premier League)
Horudhac: Arsenal vs Burnley… (Bukayo Saka oo galabta taariikh u dhigi kara horyaalka Premier League)
Ancelotti oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Elche… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)
Southampton oo taako u dhigtay kooxda Manchester City oo marti ugu ahayd garoonka Saint Mary’s… +SAWIRRO
Man United oo garoonkeeda Old Trafford guul dirqi ah kaga gaartay kooxda West Ham… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Southampton iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Man United iyo West Ham ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey… (Miyuu ku soo billowday CR7?)
Waa immisa lacagta laga jaran doono mushaharka Cristiano Ronaldo haddii ay Man United usoo bixi weyso tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe?
Horudhac: Southampton vs Manchester City… (Waa sidee rikoorka la yaabka leh ee ay Saints ka heysato kulammada ay wajahdo kooxaha difaacanaya Premier League?)
Massimiliano Allegri oo hal arin kaliya ka doonaya Cristiano Ronaldo
Dajiye January 1, 2019
(Juventus) 01 Jan 2019. Macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri oo ka hadlay dhowr arimood muhiim ah, balse wuxuu inta badan wareysigan uu bixiyay kaga hadlay Cristiano Ronaldo.
Ciyaaryahankii hore ee kooxd Real Madrid ayaa ku sugan safka Juventus tan iyo bilawga xili ciyaareedkan, wuxuu ka caawiyay Bianconeri ah in ay u gudubto wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo aya sidoo kale ilaa iyo hatan hogaminaya gooldhalinta horyaalka Serie A-da, kadib markii uu soo dhaliyay 14 gool.
“Ronaldo kama duwana waxa aan ku fikirayay, waan ogaa inuu yahay ciyaaryahan weyn, wuxuu leeyahay xirfad heer sare ah, wuxuu doonayaa inuu noqdo maalin kasta kan ugu fiican, tani waa qiima muhiim ah ee na caawin doonta dhammaanteen”.
“Layaab iguma noqoneyso waxa uu sameenayo Cristiano Ronaldo, balse waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho waa cajiib inuu arko ciyaartiisa sababtoo ah waa qaas, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inuu mar walba diirada saaro, hadii ay ahaan lahayd kulan ama tababarka kooxda”.
“Waxa kaliya aan ka doonayo isaga ayaa ah hal arin, taasoo ah gooldhalin, waana waxa uu ka war qabo Cristiano Ronaldo inuu tusaale ugu noqday dadka oo dhan”.
“Ku guuleysiga horyaalka waa ujeeddo dabiici ah, balse Ronaldo waa inuu nasiib ku yeeshaa tartanka Champions League, Ronaldo waa farxada kooxda Juventus iyo kubada cagta Talyaaniga.
Raheem Sterling oo fariin u diry kooxda Liverpool kahor kulanka khamiista
"Haddii ay Liverpool naga badiso....".- Guardiola oo Digniin kama dambeys ah u diray kooxdiisa Man City ka hor kulanka Khamiista